Ronaldo Oo Ku Guulaystay Abaal Marinta Globe Soccer Ee Xidiga Sanadaka 2014 Ugu Fiicanaa - Wargane News
Home Sports Ronaldo Oo Ku Guulaystay Abaal Marinta Globe Soccer Ee Xidiga Sanadaka 2014...
Ronaldo Oo Ku Guulaystay Abaal Marinta Globe Soccer Ee Xidiga Sanadaka 2014 Ugu Fiicanaa
Xidiga kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Portugal ee Cristaino Ronaldo ayaa ku guulaystay abaal maritna Globe Soccer ee xidiga ugu fiicnaa sanadkan 2014. Xaflada abaal marintan ayaa ka dhacday Dubai.
Ronaldo ayuu sanadkan 2014 u ahaa sanadkii waayihiisa ciyaareed ugu fiicnaa, isaga oo kooxdiisa Real Madrid kula guulaystay afar koob oo kala ah Champions Leaque-ga, Copa Del Rey, Uefa Supper Cupka iyo waliba koobka kooxaha aduunka oo ay dhawaan ku guulaysteen.
Ronaldo ayaa sidoo kale ka mid ah saddexda ciyaartoy ee iskugu soo hadhay abaal marinta shaqsiga ah ee Ballon d’Or-ka ee sanadkan 2014.Ronaldo ayaa xili ciyaareedkan ku jira qaab ciyaareedkiisii abid ugu fiicnaa isaga oo kooxdiisa ka caawiyay inay horyaalka La Ligaha hogaanka u hayso kadib markii uu 25 gool oo horyaalka ah u dhaliyay.
Ronaldo oo xaflada abaal marinaha lagu bixinayay ka hadlayay ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo dadka Real Madrid, ciyaartoyda Kooxda iyo tababaraha Real Madrid. Waxaanu soo qaadanay xili ciyaareed fantastik ah, waxaananu ku guulaysanay afar koob, waxaananu nahay mid ka mid ah kooxaha aduunka ugu fiican”.
“Inaan Champions Leaque-ga ku guulaysanaa waxay ahayd wax khaas ah, waxaanan wanaag ka rajanayaa inaan markale ku guulaysano. In aan abaal marintan ku guulaystaa waa farxada iigu wayn aadna waan ugu hanwaynahay
Ronaldo ayaa cadeeyay inuusan jirin wax culays ah oo uu dareemayaa wuxuuna yidhi: “Maya, ma dareemayo wax culays ah. Wax culays ahi ima saarna sabaabtoo ah waxkastaaba aniga si dabiici ah ayay iigu yimaadaan, anigu ma doonayo inaan cidna waxtuso”.
“Aad ayaan u faraxsanahay waxaanan sameeyaa waxa aan jecelahay taas oo ah inaan kubbada cagta ciyaaro, inaan goolal dhaliyo, inaan gool caawiye ka noqdo si aan kooxda u caawiyo iyo inaan muujiyo inay Real Madrid tahay kooxda aduunka ugu fiican”. Abaal marintan ayuu sanadkii hore ee 2013 ku guulaystay xidiga kooxda Bayern Munich ee Franck Rivery.
Somaliland: Shacabka Reer Laascaanood oo Soo Dhaweyn Ballaadhan Ku Qaabilay Wefti uu Hoggaaminayo Murrashax Muuse Biixi
Somaliland: Samsam Abdi Adan is benevolent minister for Somaliland people